WOWOW वाल माउन्ट पट्ट फिलर ब्रश निकलमा
घर / भान्साको नल / भाँडो फिलर नल / WOWOW वाल माउन्ट पट्ट फिलर ब्रश निकलमा
रेटेड 5.005बाहिर आधारित 19 मूल्यांकन ग्राहक
(19 ग्राहक समीक्षा)
यसको एर्गोनोमिक डिजाइनको लागि धन्यवाद, भित्ता माउन्ट पट्ट फिलर स्टेनलेस प्रयोग गर्न सहज छ।
यसको उच्च ग्रेड स्टेनलेस स्टील सामग्री यो अत्यधिक टिकाऊ बनाउँछ।
यो उत्पादनले भरपर्दो समर्थनको साथ रसोइब प्रदान गर्दछ।
2311300 स्थापना निर्देशन
ब्रश निकल पट्ट फिलर नल 2311300
तपाइँको नयाँ भान्सा डिजाईनमा केहि विशेष सुविधाहरू खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको भान्साको दुवैलाई एकै समयमा कार्य र आरामदायक बनाउन? त्यसोभए यो ब्रश निकल पट्ट फिलर नल तपाईंको लागि केही चीज हुन सक्छ। के तपाईं कहिलेकाहीं तपाईंको भान्साको सिinkबाट ठूलो चुँडीमा आफ्नो चुलोमा ल्याउन संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? यो असुविधा WOWOW को यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नलको साथ विगतको हो। तपाईंको खाना पकाउने क्षेत्रको नजिक पानीको कनेक्शन पाउन पट फिलर नलहरू सामान्यतया तपाईंको भान्साको चुलोमा पछाडि स्थापना गरिन्छ। यो विशेष गरी उपयोगी हुन्छ जब तपाईले फोकामा पानीले ठूला भाँडा भर्नुपर्दछ। तपाईंले अब भाँडा सार्नुपर्दैन जुन सजिलै दर्जनौं औन्स वजन गर्न सक्दछ। विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो बाहु वा कलाई तनाव गर्न चाहनुहुन्न, यो तपाईंको भान्छाको आरामको लागि धेरै सजिलो समाधान हुन सक्छ।
WOWOW को ब्रश निकल पट्ट फिलर नलको अर्को सुखद साइड इफेक्ट तथ्य यो हो कि तपाईं आफ्नो भान्साको स्टोभ सजीलो सफा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किनकि तपाईंसँग पानीको जडान छ। सफा बर्तन फिलर नलको साथ यति सजिलो छ। WOWOW को ब्रश निक निक पट्ट फिलर नल एक चुहावट मुक्त अनुभव ग्यारेन्टी गर्न डबल सिरेमिक वाल्भ संग सुसज्जित छ। यदि एउटा भल्भ खुला रहन्छ भने यसले जे होस् केही लीक हुने छैन। त्यसकारण तपाईको भान्साको चुल्हो जहिले पनि सुख्खा रहन्छ भनेर निश्चित हुन दुबै भल्भहरू बन्द गर्न सिफारिस गरिन्छ। माफ गर्नु भन्दा तिमी सुरक्षित हुनु पर्छ!
आधुनिक ब्रश निकल पट्ट फिलर नल
WOWOW को यो विशेष ब्रश निकल भाँडो नलको आधुनिक दृष्टिकोण छ। यो निश्चित रूप मा तपाइँको भान्सा मा यसको कार्यात्मक जोडिएको मान को अलावा एक विशेष, नवीन स्पर्श दिन्छ। जस्तो कि भाँडो फिलर नलहरू सामान्य रूपमा चिनिदैनन्, प्राय जसो व्यक्तिहरूले तपाईको घरको भान्छाको बारेमा जब तपाईंलाई यस बारेमा सोध्ने गर्छन्। भान्सामा साना फोकस पोइन्टहरू नल हुन्। यसको मतलब यो हो कि जनताको ध्यान स्वाभाविक रूपले किचेनको धुवाँतिर खिचेको छ जब तिनीहरूले तपाईंको भान्साकोठाँमा हेरे। यो ब्रश निकल भाँडो नल कुनै पनि आधुनिक भान्छा सजावटमा ठीक फिट हुन्छ, र निश्चित रूपमा केहि विशेष ध्यान आकर्षित गर्दछ।
वाहको ब्रश निकल पट्ट फिलर नललाई सजिलैसँग अन्य आधुनिक भान्साको नलसँग मिलाउन सकिन्छ र तपाईंको भान्सा सजावटमा एक सुमधुर एकता गठन गर्दछ। गोलाकार आकारका साथ संयोजनमा वर्ग रेखाहरूले एक चंचल तमाशाको गठन गर्दछ। WOWOW का डिजाइनरहरू बोल्डेस सुरुचिपूर्ण डिजाइनहरू बनाउने रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन् जुन लक्जरी किचेन डिजाइनहरूको बारेमा कुनै पनि शीर्ष-खाच पत्रिकामा सजीलै प्रकाशित गर्न सकिन्छ।
पुच्छ निक्ल पट फिलर नलमा पुग्नुहोस्
भाँडो भरिने नलको ह्यान्डनेस भनेको यो हो कि तपाइँ यसलाई तपाइँको चुलोको छेउमा पर्खालको बिरूद्ध माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजिलै भित्ता बिरूद्ध भण्डार गर्न सकीन्छ डुअल स्विंग जोर्नीहरूको कारण। यस तरिकाले यसले तपाइँको खाना पकाउने ठाउँ कष्ट दिदैन किनकि यसले खाना पकाउने ठाउँ खाली गर्दछ। तर तपाईं संग लगभग २ inch इन्च को एक प्रभावशाली पुग्न पुग्छ कि कुनै पनि स्टोभ पिट मा कुनै भाँडो भर्न सक्छ। भाँडो फिलर नल सजिलैसँग विस्तार गर्न सकिन्छ जब तपाईंलाई वास्तवमा यसको आवश्यकता हुन्छ, र तपाईं तुरुन्तै यो फिर्ता लिनुहुँदा काम सकिसकेपछि। जब तपाईं यो ब्रश निकल पट्ट फिलर नल स्थापना गर्नुभयो, तपाईं पछुताउनु हुनेछ कि तपाईंले उपकरणको यस टुक्रा पहिले स्थापना गर्नु भएको छैन।
पानी पनि उच्च गुणवत्ता Neoperl एबीएस aerator संग सजीलो जान्छ। यो तपाइँलाई एक anti-splatter र चुहावट मुक्त पानी अनुभव प्रदान गर्दछ। तपाईंको कुकि। स्टोभमा तपाईंको भाँडाभरि पानी पानीले भर्नु कुनै पछाडि चल्दैन। पानी छिपेको खतरनाक परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी जब तपाईं आफ्नो भान्साको चुल्होको अन्य आगोको गड्ढामा पकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको खाना पकाउने स्टोभ जहिले पनि सुरक्षित रहन्छ, र तपाईले भान्साकोठामा कुनै खतरनाक कारणविना आगोको गड्ढा हुँदा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
क्वालिटी ब्रश निकल पट्ट फिलर नल
यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नलको दुई भल्भहरू सिरेमिक सामग्रीबाट बनेका छन्, र ग्यारेन्टी टर्नि .को ग्यारेन्टी गर्दछ। तपाईले याद गर्नु भयो कि भल्भले कुनै पछाडि नोक्सान र कुनै घर्षणको कारण गर्दैन। फलस्वरूप तपाईं एक चिकनी अपरेशन को सुनिश्चित हुनुहुन्छ। जब तपाईंसँग कमजोर जोडहरू हुन्छन्, यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नल सजिलैसँग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसको एर्गोनोमिक डिजाइनको लागि धन्यवाद, भित्ता माउन्ट स्टेनलेस बर्तन फिलर प्रयोग गर्न एकदम सहज छ। दुई degrees 360० डिग्री घुमाउन योग्य स्वि sw्ग हतियारहरू अपरेट गर्न सहज छन्।
यसको उच्च-ग्रेड स्टेनलेस स्टील सामग्रीले यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नललाई अत्यधिक टिकाऊ बनाउँछ। यस भाँडो फिलर नलको ब्रश निकल सतह दुबै एन्टी-स्क्र्याच र क्षरण-मुक्त छ। कनेक्टरहरू ठोस काँसाले बनेका छन्, जसले यसमा कुनै धातु अवशेष बिना स्वस्थ पानी प्रवाहको ग्यारेन्टी गर्दछ। तपाईं र तपाईंको परिवारको स्वास्थ्यका लागि उत्तम समाधान। क्वालिटीको कारण, यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नल अक्सर व्यापारिक ठाउँहरूमा रेस्टुरेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
वारेन्टी ब्रश निक निक पट्ट फिलर नल
ब्रश निकल पट्ट फिलर नल पूर्ण स्थापना किटको साथ आउँदछ। यो स्थापना किटको साथ तपाईं सजीलो ब्रश निकल पट्ट फिलर नल आफुलाई कुनै समस्या बिना नै स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँको महँगो प्लम्बर लागत बचाउनेछ। स्थापना किट सबै सामग्रीको साथ आउँदछ जुन तपाईं भित्ता माउन्ट पॉट फिलर नल संलग्न गर्न आवश्यक छ। एलेन रिन्च सहित, टेफ्लन टेप, र स्थापना हातहरू तपाईंको हातहरू नोक्सान नगर्न र स्थापना प्रक्रियामा तिनीहरूलाई सफा राख्न। त्यसकारण हामी ग्यारेन्टी दिन्छौं कि तपाईंले यो ब्रश निकल पट्ट फिलर आफुलाई एक आधा घन्टा भित्र स्थापित गर्न सक्नुहुनेछ। अवश्य शर्तमा मात्र तपाईसँग सहि ठाउँमा पानीको पोइन्ट छ।
WOWOW को रूपमा ब्रश निक निक पट्ट फिलर नल को गुणवत्ता संग विश्वस्त छ, यो एक मानार्थ5बर्षे वारंटी अवधि संग प्रदान गर्दछ। WOWOW ले तपाईंलाई फेला पार्न सक्ने पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछ, यसले तपाईंलाई 90 ०-दिनको पैसा फिर्ताको ग्यारेन्टी पनि दिन्छ। त्यसैले तपाईं कुनै पनि जोखिम चलाउनुहोस्। यदि तपाईं यस ब्रश निकल पट्ट फिलर नलको साथ विश्वास गर्नुहुन्न भने, तपाईं केवल पूर्ण फिर्ती पाउनुहुन्छ। WOWOW यसको उत्पादका लागि खडा हुन्छ र जुन तपाइँले तुरून्त नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ। संक्षेपमा ब्रश निकल पटल फिलर नलका फाइदाहरू:
• आधुनिक डिजाइन बर्तन फिलर
• गुण जोड्ने र भल्भहरू
Use अत्यधिक प्रयोग गर्न सुरक्षित
• निकल समाप्त ब्रश
30 minutes० मिनेटमा स्थापना गर्न सजिलो
SKU: १2311300००।। विभाग: भान्साको नल, भाँडो फिलर नल टैग: ब्रश निकल, भाँडो फिलर, एकल लीभर
13.56 x 7.24 x 1.42 इन्च
De 360० डिग्री रोटेशन, डबल संयुक्त, तह
यो भाँडो फिलर नल मेरो श्रीमान्को लागि स्थापना गर्न सजिलो थियो, यसलाई लिन यसले लगभग १० मिनेट लिन सक्दछ। आन्दोलन सहज र सजिलो छ, अहिले सम्म यसको प्रयोगको कुनै सवाल छैन। यो धेरै कडा हो र प्रवाह उत्तम छ, चुहावट पनि निःशुल्क छ, ब्रश निकल फिनिस सुन्दर छ र मेरो बाँकी भान्छाको साथ पूर्ण रूपमा मेल खान्छ।
एल *** टी2020-07-02
मैले केही दिन सफा र आधुनिक लाइनहरू सहितको एक ब्रश निकल भाँडो नलको खोजीमा बिताएँ जुन मेरो बजेट भित्र थिए। मैले यो भाँडो फिलरलाई WOWOW मा फेला पारेँ र बढी खुशी हुन सकेन। यो नल धेरै राम्रो गुण हो, स्थापना गर्न एक हावा थियो, राम्रो काम गर्दछ, र हाम्रो भान्छामा अद्भुत देखिन्छ। फुलेको ठूलो ब्रान्डको मूल्य फेरि कहिले भुक्तानी गर्ने छैन। अत्यधिक सिफारिश!
फरक उत्पादनको साथ एक डरलाग्दो अनुभव पछि, लीक भएपछि, हामीले यस बर्तन फिलर नलको प्रयास गर्ने निर्णय गर्यौं। यो भारी शुल्क हो र अहिले सम्म ठूलो काम गर्दछ, यो लीक हुँदैन, स्थापना गर्न धेरै सजिलो छ। यो हाम्रो सबै किचन उपकरणहरूसँग मेल खान्छ, ब्रश गरिएको निकल फिनिश लुकलाई मनपर्दछ, ठोस ब्रास निप्पल गुण उत्कृष्ट छ, हामीले खुसीसाथ यो उत्पादन किनेकोमा धेरै खुसी छ।
एच *** y2020-07-11
यसमा भाग्य बचत गरियो बक्स भण्डारहरू मध्ये एकबाट यसलाई किन्नु भन्दा झन्डै times पटक भन्दा बढी। सुपर स्थापना गर्न को लागी सजिलो र राम्रो देखिन्छ!
हामी अद्यावधिक / अपग्रेड गर्दैछौं हाम्रो सम्पूर्ण सर्का १ 1984 home XNUMX को घर एक धेरै साधारण, भुक्तानीको रूपमा-जाने-जाने बजेटमा। मेरो श्रीमान् एक रसोइलो हुनुहुन्छ र भान्साकोठा पहिलो पहिलो ठूला परियोजनाहरू मध्ये एक थियो। हामीले निर्णय गर्यौं कि स्टोभको माथि अत्यन्तै राम्रो भाँडो हाम्रो भान्साकोठामा चासो र मूल्य थप्नको लागि एक स्मार्ट तरीका हो। सबैले यसलाई जो यो लाग्छ कि यो यति अनौंठो र चतुर छ। जब मेरी आमा भेट्न आउँछिन् र सुपको एक ठूलो भाँडो पकाउन चाहान्छिन् उनले सि longer्कबाट स्टोभमा पानीको भारी भाँडो बोक्नु पर्दैन। यस उत्पादनले हाम्रो व्यावहारिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ र हाम्रो घरको विकसित सौंदर्यमा पूर्ण रूपमा फिट गर्दछ।
हामी पतोफिलरलाई माया गर्छौं, र चुहावट वा केहि पनि समस्या छैन। यो एकदम राम्रो देखिन्छ र ठिकसँग कार्य गर्दछ।
एल *** ए2020-07-26
हामीले हर्केन हार्वेलाई पछ्याउँदै बलपूर्वक पुन: निर्माण गरेका थियौं र मैले रोजेको यो “अपग्रेड” हो - मैले यसलाई मेरो उपकरण ग्यारेजमा राखें ताकि म यसलाई बिना नै मेरो केउरीग भर्न सक्छु। यो धेरै राम्रो भएको छ, धेरै खुसी!
जी *** ओ2020-07-28
मेरो घरको अलि अनौंठो, पुरानो, रोकिएको भाँडो फिलर थियो जुन सुन्दर थियो तर चुहावट थियो। मैले यसलाई बदल्न केहि सरल चरणहरू प्रयास गरें तर भल्भको सब भन्दा साधारण शैली फिट भएन। म बजारमा सस्तो तर सुन्दर प्रतिस्थापनको लागि थिएँ, पर्खालमा प्वाल प्वाल गर्न भारी प्रयोगमा हुनु भन्दा बढी। यो कि बिल अविश्वसनीय राम्रोसँग फिट गर्दछ, र यो पर्याप्त कार्यात्मक छ कि म यसलाई भारी भाँडा भर्न प्रयोग गर्दा विश्वस्त छु।
- महँगो। यस भाँडो फिलरको मेरो पुरानो भाँडो फिलरको नयाँ संस्करणको १/1 भन्दा कम खर्च भयो।
- सुन्दर। तेल-रबड कांस्य (-शैली) समाप्त उत्तम छ।
फंक्शनल मैले एक दर्जन भाँडा भर्न प्रयोग गरेको छु।
पूर्ण दुई भल्भहरू, एक स्विंग हात, र एक aerator।
एक अतिरिक्त सिरेमिक डिस्क भल्भको साथ आउँछ यदि तपाईंलाई कहिले प्रतिस्थापन चाहिन्छ।
-शर्ट। पाख्रा अलि छोटो छ, तर यो सि pain्कमा लिनु भन्दा अस्थायी रूपमा भाँडाको नलको नजिक धकेल्ने दुखाइ होइन, त्यसैले यो धेरै व्यक्तिहरूको लागि समस्या होईन यदि तपाईंको ओभनको लागि छोटो छ भने पनि।
-Splashes यदि तपाईं भित्ता भल्भ पहिले खोल्नुहुन्छ। मलाई थाहा छैन कि यो यो मोडल हो वा केवल किनभने मेरो पुरानो नल corroded थियो, तर यो मोडेलमा दबाव धेरै छ। यदि मैले पहिलो भित्ता अन्तमा र त्यसपछि ट्याप खोलें भने, यो नुहाउने टाउको जस्तो थुक्छ। यदि म पहिलो ट्याप खोल्छु तब भित्ता, म सोझै प्रत्यक्ष स्ट्रीम पाउँछु। यो एक सानो क्वार्क हो, मलाई अतिथीहरू सकुन्जेल सावधान हुनुपर्दछ।
कुनै माउन्ट ब्रैकेट। मेरो पुरानो नलको पाखुरा ब्र्याकेट थियो भुनि ठीक माउन्टमा माउन्ट गरिएको थियो भनेर। यो एक गर्दैन, र एक ठाँउ स्थापना मा निर्भर गर्दछ सही ठाँउमा आयोजित गर्न। म अर्को मोडमा पटो फिलरलाई टार्क गर्ने प्रयास गरेर मेरो अपरिचित प्लम्बिंगलाई चुनौती दिन गइरहेको छैन, त्यसैले यो भित्तामा अलि ढीला छ। मलाई लाग्छ यो उत्तम छ यदि मैले यसलाई टार्क गरेमा, तर म यो निश्चित गर्न सक्दिन कि पुरानो स्थापना एकदम सही थियो, त्यसैले म यसलाई अहिले राख्छु। यति लामो समय सम्म कुनैले हातमा यान्क्स गर्दैन, यो पर्खालमा पूर्ण रूपमा बस्दछ। मैले भनेझैं, म प्राय: उपस्थितिहरूको ख्याल राख्दछु र कहिलेकाँही मेरो फिलर प्रयोग गर्दछु, त्यसैले मसँग १००% ठीक छ।
जी *** ई2020-08-04
उत्तम! मूल्यको लागि उत्कृष्ट मूल्य। यो उच्च-मूल्यको नेमब्रान्ड जत्तिकै भारी छ।
हामीले १/२ ″ पुरुष अन्त्यलाई वाटरलाइनमा सोल्डर गर्नुभयो र यो दायाँ त्यो जडानमा (१/२ ″ पाना र टाईल पछाडि) यसका साथ आएका पुरुष-पुरुष ब्रास प्रयोग नगरी खराब गर्‍यो। हामीले एक अन्य समायोजन गरेका थियौं र १/२ ″ मोटा एमडीएफ बोर्ड वाटरलाइनको वरिपरि स्थापना गरेका थियौं ताकि हामी सिधा ठोस चीजमा पक्रन सक्थ्यौं। यी दुई चरणहरू वास्तवमै स्थापना घनिष्ठ देखिन्थ्यो।
डुअल भल्भले कुनै ड्रिपहरू सुनिश्चित गरेको छैन। यो अद्भुत देखिन्छ। हतियारहरू केवल सही मात्राको प्रतिरोधको साथ सार्दछन्। हामी समारोहसँग खुसी छौं। हामी उच्च मूल्यको इकाईहरुमा बचतबाट पनि खुसी छौं जुन एकै गुणवत्ता देखिन्छ।
एउटा कुरा जुन म अर्को पटक फरक तरीकाले गर्दछु: म यसलाई स्थापना गर्दछु म भन्दा ″ ″ कम। स्टोभ माथि १″ डिग्री मा पानी बर्तनमा खस्नको लागि लामो बाटो छ। आईडी सम्भवतः यसलाई १२ को करीब स्थापना गर्दछ ″ यदि मैले यो फेरि गरेको थिएँ भने।
मैले धेरै खरीदें (चार सटीक हुन) अन्य संस्करणहरू जुन धेरै कम पैसाको लागि समान देखिन्थ्यो। मैले नयाँ महिनाको अर्डर गर्न दुई महीना खर्च गरें, यसलाई स्थापना गरिसकेपछि मात्र यसलाई एकाधिक पोइन्टबाट चुहिन, यसलाई फिर्ता गर्न, फिर्ताको लागि कुर्दै, र अर्को अर्डर गर्न। फिलर पछि फिलर फिर्ता पछि म निराश थिएँ। मैले निर्णय गरे कि मैले यसलाई बढावा दिनु पर्छ र थोरै पैसा खर्च गर्नु उत्तम उत्पाद पाउनको लागि हो कि आशा लीक हुने छैन। आगमनमा, उत्पादको गुणवत्ता मैले आदेश गरेको $ kn० नक अफहरू भन्दा धेरै राम्रो थियो। स्थापना अपेक्षा भन्दा राम्रो भयो! अतिरिक्त भागहरू समावेश गरिएको थियो, ग्राहक सेवालाई मुद्दाहरूको साथ सम्पर्क गर्ने तरिकाको साथ यसलाई फिर्ता गर्नु भन्दा, र उचित अंग्रेजीमा पनि दिशा निर्देशनहरू! स्थापना भएदेखि हामीसँग शून्य लीक वा अन्य मुद्दाहरू छन्। म पैसाको कुरा बुद्धिमान र डलर मूर्ख थिएँ। यो केवल एक भाँडो फिलर हो (मैले व्यवहार गरेको पाँच मध्ये) कि एक नजर लायक थियो। वाह सम्भवत: आधा लागतको लागि यस ब्रान्डको सयौं दस्तकहरू मा हेर्नुहोस् र तिनीहरूलाई बन्द गर्नुहोस्।
गजबको उत्पादन ठोस र धेरै सुविधाजनक। हामीसँग q०qts सम्म ठूला भाँडाहरू छन् र तिनीहरूलाई जवाफ दिने जवाफ यही नै हो। तपाईंले स्थापना गर्न केहि प्लम्बिंग कौशल जान्नु आवश्यक पर्दछ तर यो राम्रोसँग लायक छ। यो स्टोर ब्रान्डको रूपमा (मशीन सुन) को रूपमा पाँचौं लागत हो। हामीलाई मन पर्छ।, हामीलाई राम्रो लाग्छ। पिचरहरू भर्नु पर्ने कुनै छैन! ठोस निर्माण र एक अतिरिक्त भल्भको साथ आउँदछ
मेरो फिंगरप्रिन्टलेस स्टेनलेस उपकरणहरूको तुलनामा, यसको र war्ग तातो र अधिक सुनौलो छ र नयाँ उपकरणहरू कूलर बढी नीलो-चाँदी हो। यो अझै पनि मेरो उपकरणहरूसँग र तुलनाको लागि उत्कृष्ट देखिन्छ ... यो ब्रान्ड ब्रश निकल फिक्स्चरहरू जस्तै मसँग मिल्छ जुन मसँग अन्य कोठामा हुन्छ (यदि तपाईं रंगको चाँदीको लागि यसको गेज प्राप्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने)।
समारोह सबै भन्दा राम्रो अंश हो। मेरा भाँडाहरू माथि मा माथि स्थापित गरिएको थियो लामा भाँडाहरूको लागि अनुमति दिन तर जब पानी पूर्ण ब्लास्टले साना साना भाँडाहरू भरिरहेको हुन्छ, पानी भाँडाबाट बाहिर फुट्ने गर्दैन।
यो swivels र एक हात को हल्का स्पर्श संग धेरै सजिलै संग सार्दछ र डबल पक्षीय छ।
धेरै उच्च पानीको चाप, कुनै लीक छैन, भविष्यको आवश्यकताको लागि अतिरिक्त भल्भ। समग्रमा अत्यधिक सन्तुष्ट र आदानप्रदान हुँदैन
यो मेरो श्रीमान्को लागि स्थापना गर्न सजिलो थियो र मेरो सबै भान्साका उपकरणहरूसँग मेल खान्छ। मसँग प्रयोगको कुनै सवाल छैन र आन्दोलन सहज र सजिलो छ। यो धेरै कडा हो र प्रवाह उत्तम छ। म क्वालिटीसँग एकदमै खुसी छु र मैले भुक्तान गरेको मूल्यबाट खुसी छु। मँ निश्चित रुपमा यो फेरि किन्नेछु यदि आवश्यकता कहिल्यै प्रस्तुत भयो भने।
लवली पोटफिलर तर दुर्भाग्यवस यो लीक हुन्छ हाम्रो ठेकेदारले यसलाई ठीक गर्न कोशिस गरेपछि पनि। दुःखको कुरा, उसले अहिले स्थापना गरेन र अब म यो फिर्ता गर्न सक्दिन। साँच्चिकै यो पोटफिलरको लुक र यसको लागत मनपर्दछ।
हामीलाई मन पर्छ।, हामीलाई राम्रो लाग्छ! प्लम्बरले यसलाई स्थापित गरेको थियो र यसले आकर्षणको रूपमा काम गरेको छ। पाको र आलु उमाल्ने बेला वा उमालेर वृद्ध आमाले यसलाई प्रयोग गर्दछ। उनी आर्थराइटिक छिन् र सिink्कबाट पूर्ण भाँडो लिन सक्दैनन्।
भाँडो फिलर उत्कृष्ट गुण हो र ग्राहक सेवाबाट पोष्ट खरीद समर्थन असाधारण हो! म यो उत्पादन कि कि अधिक खुशी हुन सकेन! निश्चित रूपमा उनीहरूको उत्पादनहरू फेरि किन्नेछ र सबै म जान्दछु सिफारिस गर्दछ !!
भाँडो फिलरलाई माया गर्नुहोस्। म पछाडि भित्ताको छेउमा स्पिगट प्रयोग गर्छु। भाँडोमा पानीको मात्रा नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो। भाँडा माथि बाहिर पर्दछ र सानो प्रयास संग पछाडि भित्तामा
हामीसँग पहिले कुनै भाँडो फिलर कहिल्यै भएको थिएन त्यसैले यो यसको नवीनता हुन सक्छ तर यो भाँडो फिलर राम्रोसँग बनाइएको र स्टाइलिश छ। यो हाम्रो नयाँ भान्छामा एक उत्तम थप हो।